Qabsaa’ota Oromoo abbaafi ilmaan ajjeefamanii ganna 28 oliif iddoo awwaalchaa dhorkaman - BBC News Afaan Oromoo
Yeroon isaa bara 1984 A.L.I bara Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) Chaartara keessaa bahee gara qabsoo hidhannootti deebi'e ture.
Waraana ABO konyaa (Godina) Shawaa Lixaa keessa socho'u keessatti dabballeefi loltuu ta'uun qabsaa'aa kan ture dargaggoo Shaambal Damissee Hagayya 15 bara 1984 qe'ee warra isaa keessatti, abbaa isaa Obbo Damissee Habtegabri'eel Dhiinsaa waliin loltoota TPLF'n ajjeefaman.
Maatiin isaaniis sodaadhan qe'ee gadi dhiisanii bittinnaa'an. Namoonni muraasni ollaa turan sodaa guddaa keessa osooma jiranii qe'eedhuma isaaniitti bool'a tokkotti abbaafi ilma kana awwaalan.
Waggoota 28 booda lafeen qabsaa'ota kanaa qe'ee keessaa bool'a itti awwaalamee bahee kabajaan siidaan tolfameefi awwaalamanii jiru.
'Seenaa qabsoo suuraan ol kaa'uu'
MM Abiy ABO'f odeeffannoo miliqsuu dhaabichi mirkaneesse
Kutaa 11 erga xumureen booda dargaggeessa ganna 19 ta'ee leenjii dabballummaafi waraanaa fudhatee ABO'tti kan dabalame dargaggoo Shaambal, yeroos ajajaa Waraana ABO konyaa Shawaa Lixaa kan turan nama Badhaadhaa Sarbeessaa jedhamu jalatti ijaaramuunis qabsootti turan.
Yeroos meeshaa guddaa akka hidhataniifi baay'inaanis loltoota ABO akka caalan kan himame loltoonni TPLF, ajaja waraanaa Badhaadhaa Sarbeessaa dabalatee loltoota garii madeessuun yoo to'atu gariin achumatti wareegaman.
Badhaadhaa Sarbeessaa hanga har'aatti ajjeefamuufi lubbuun jiraachuun isaa hin beekamu.
Goodayyaa suuraa Bool'a reeffi abbaafi ilmaa qotamee keessaa baafame
Dargaggoo Shaambal Damissee yeroos deeggaraa qabsoo ABO kan turan abbaa isaa Obbo Damissee Habtagbri'eel mariisisuuf jecha, waahila qabsoo isaa tokko waliin gara qe'ee dhaloota isaa Kuree Gaattiraa deeme.
Eeruun kun kan isaan gahe loltoonni TPLF lakkoofsa hedduu ta'an qe'ee Obbo Damisseetti marsanii bulanii ganama dhukaasa irratti banan.
Goodayyaa suuraa Siidaan haaraan ijaarameefi lafeen isaanii sirnaan awwaalameera
Jarri lamaanuu qe'eedhuma isaaniitti bool'a tokko keessatti awwaalaman.
Maaliif qe'eetti awwaalaman?
Yeroos deeggaraafi miseensi ABO adamfamee gariin ajjeefamaafi gariin hidhamaa ture jedhu waahillan qabsoo Shaambal Damissee har'a lubbuun jiran.
Battala abbaafi ilmi ajjeefamanitti maatiin isaanii qe'ee gadi dhiisanii baqatan.
Firriifi ollaan isaan baqatee ari'atamuu guddaaf saaxilamanii akka turanillee himu.
Hundaa ol ammoo reeffi abbaa warraa fi ilma isaanii awwaala dhabee waggoota 28'f qe'eetti awwaalamee turuun isaa isaan miidhuu dubbatu.
Lafeen qabsaa'ota kanaa Amajjii 12 bara 2020 qe'ee isaanii lafa itti awwaalamee bahee sirnaan siidaan hojjetameefi sirni awwaalcha isaanii raawwateera.
Magaalaan Amboo maatii warra qabsoo keessatti wareegamanii deggeraan jira jedha
Qubsuma Koo 41: ''Qabsoon bakkan deemu maratti na biraa hin hafne''
Itoophiyaatti lakkoofsi namoota Covid-19n qabamanii 19 qaqqabe
Itoophiyaatti alkkoofsi namoota koronaavaayirasiin qabamanii 19 gaha
Tiraamp yaada Niiwu Yoorkitti cufuu jedhu qeeqan